KUSVIRA COILS-TAKUMI AUTO CHIKAMU
Rudzii rwekutonga kwemhando iyo TAKUMI inayo kuitira kuti uwane mhando yepamusoro?
Isu paTAKUMI tinoedza kuwana "Yese mhando" pamatanho matatu anozvimiririra: - Yakabatanidzwa otomatiki macheke Test module akabatanidzwa mune otomatiki ekugadzira kutenderera tarisa magungano ese kuti ave nechokwadi chekuti chete iwo ari mumamiriro akakwana ndiwo anoramba ari mukugadzirwa. Vamwe vese vanobviswa pakarepo kubva pamutsetse vasati vapa mari isingakoshi.
Maitiro ekutonga kuti koiri inoda kuchinjwa here kana kuti kwete?
Kubata koira kugadzirisa matambudziko kunotanga nekubvisa tambo yekutsvaira plug uye nekuisa imwe yekuwedzera plug pakupera kwetambo. Isa plug plug pane chimwe chikamu cheinjini apo plug yacho inenge ichizorora ichipesana nevhu rakanaka. Dzorera injini nekuva nemubatsiri anobata kiyi munzvimbo yekutanga apo ipulagi inoonekwa kuti yakanaka.
Inguvai pfupi iyo TAKUMI inogona kugadzira zvigadzirwa zvitsva zvevatengi?
Vagadziri vemotokari pasirese pashe vanodana kune ruzivo rwehunyanzvi rwemaTAKUMI mainjiniya ekugadzira kuti vagadzire iwo akanakisa kuveza macoils einjini dzese dzeinjiniya kusanganisira module yemoto kana zvichidikanwa. Isu tinodada nenguva yedu pfupi yekuvandudza uye vatengi vanokoshesa hukama hwepedyo hwekushanda nemapoka edu einjiniya.
Ndeupi rudzi rwekugadzira tambo iyo TAKUMI yainayo yemabatiro emagetsi?
TAKUMI zvigadzirwa zvekugadzira ndezve modular dhizaini inokodzera yeboka rinoshanda uye inopa yakanyanya kugadzikana. Izvo zvinogona kuwedzerwa, kudzikiswa pasi, kusanganiswa uye kushandurwa mune pfupi nzvimbo yenguva, nokudaro ichibvumidza mari uye yepamusoro-mhando kugadzirwa kwezvinhu zvinosvika zviuru zvishanu pazuva zvichichinjana pakati peakakura uye madiki akateedzana uye nemhando dzakasiyana dzeakisi yemoto.
Ndeapi magetsi anogona kuita TAKUMI igntion coils?
TAKUMI igntion coils inogona kutora voltage yakakura kupfuura 30 KV
Ndeapi tembiricha inogona TAKUMI kuvesa maoil anotakura?
Tembiricha-inodzivirira: inosvika 150 ° C, pfupi nguva kusvika 165 ° C
Ndeapi maficha eAKAKUMI kuvesa mavhiri?
Pane zvinhu zvina zvakasarudzika zveTakumi igntion coils: Yakakwira-chaiyo yekuisa moto Zvinhu zveVatengi-zvakasarudzika zviitiko uye sisitimu yekubatanidza Rational makomputa-anodzorwa matekiniki ekugadzira Matekiniki-tech mhando inoenderana ne zero-kukanganisa zvirongwa